Yintoni iToom Boom?
Ngu-Ashley Watters, kwiNdlu ye-Abshier
I-Toon Boom sisiqwengana sesoftware ekuvumela ukuba wenze oopopayi kunye nebhodi yamabali. Isoftware kaToom Boom ikuvumela ukuba uyile kwaye wenze iigraphics zobungcali, ezikwimizi-mveliso. Inkampani esekwe eCanada isetyenziswe ngabavelisi abaninzi abaziwayo abanjengoDisney, uNickelodeon, kunye noWarner Bros. oopopayi, phakathi kwabanye.
Imifanekiso ngoncedo lwe www.toonboom.com
Isoftware kaToon Boom inazo zonke izixhobo zokuqamba imifanekiso esemgangathweni yoopopayi.
I-Toon Boom isetyenziselwe ukunceda ukwenza oopopayi kwezinye zeenkqubo zeTV ezithandwayo kunye neemovie. Umzekelo, Umfana wosapho , Iifilimu zeSimpsons , Futurama , NguGeorge onomdla , Umlindi weNgonyama , Kwaye iimveliso ezininzi zenze ukuba zisebenzise izinto ezintle kwisoftware kaToon Boom.
Imvisiswano Isisombululo esigqibeleleyo se-2D sopopayi kuye wonke umntu ovela kubathandi boopopayi ukuya kwii-animators ze studio. Le software isetyenziselwe iiprojekthi ezinje Bob's Burgers . Esi sisombululo kulula ukusisebenzisa kwaye sivelisa iziphumo zobungcali. Ngesixhobo esipheleleyo sezixhobo, unokwenza zonke iintlobo zemisebenzi yokuphilisa. IHarmony 14, ingxelo yokugqibela yakhutshwa ngoJulayi 2016.
Ungazama naluphi na uhlobo lweHarmony simahla ngesilingo seentsuku ezingama-21. Nazi Iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo zeHarmony iyafumaneka, kuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali:
Imvisiswano ebalulekileyo Ifumaneka nge $ 15 ngenyanga.
IHarmony ePhambili: Olu rhumo lubonelela ngezixhobo ezingaphezulu kwe- $ 38 ngenyanga.
IHarmony yeNkulumbuso: Esona software sigqibeleleyo sopopayi sifumaneka nge- $ 78 ngenyanga.
Pro yebhodi yamabali : Isoftware ephilayo ikuvumela ukuba ubalise ibali ngokuyilayo. Isetyenziswa zizitudiyo ezininzi zobuchwephesha ukuphuhlisa iindaba zamabali kunye nokusebenzisa izixhobo ezininzi zokuyila ukuphuhlisa ukulandelelana kwe2D kunye ne3D. Ungangenisa iskripthi, iaudiyo, imifanekiso kunye nezinye izinto zokuyila ukugqibezela ibali. Isuti epheleleyo yezixhobo ibanzi kwaye ikuvumela ukuba ubeke italente yakho yobugcisa.
Ngoluhlu olupheleleyo lwezixhobo kunye nokusetyenziswa ngokulula, iToon Boom inokusetyenziselwa iingcali zeshishini, abafundi, kunye nabazithandayo.
Izicelo zeBoom Boom
Izinketho zezicelo zeToon Boom azipheli. Isoftware inokusetyenziselwa iifilimu zoopopayi, iintengiso, ukukhula komdlalo, usetyenziso lweselfowuni, kunye nokunye. Ungazisebenzisa izixhobo ukwenza umzobo ngokukhululekileyo kubalinganiswa nakwindawo entle. Ngokwazi ukongeza isithunzi, ubunzulu, kunye nokuhamba, ungongeza izinto ezininzi njengoko ukhetha.
Izixhobo ezithunyelwa kwamanye amazwe zikwenza kube lula ukupapasha umsebenzi wakho ngeendlela ezahlukeneyo ukulungiselela imeko yakho.
I-Toon Boom ibonelela ngethala leencwadi elibanzi njani-ukufundisa ividiyo ukukunceda wenze uninzi lweemveliso zabo.
Inkxaso yeToom Boom kunye neeforamu
Toon Boom unikezela inkxaso kwaye iiforamu ezikwi-intanethi ukukunceda kubo nabuphi na ubunzima onokuba nabo kwiimveliso zabo. Ukongeza, unokucela imibuzo kwaye ufumane iimpendulo kwiiforamu zabo ezikwi-Intanethi. I-Toon Boom ikwabonelela ngokubanzi okubelelwe elwazini Apho unokukhangela khona iingcebiso ngokujongana neengxaki kwaye ufumane isisombululo seengxaki kwindawo yogcino lwazo lwamanqaku.
I-Toon Boom ikwabonelela ngomboniso apho ungathumela khona umsebenzi ukuze ubonwe lihlabathi. Jonga izimvo zoopopayi okanye uthumele into oziqhenya ngayo.
Ijusi yamagilebhisi kunye ne-lisinopril
usana lwamayeza okunyanga iintsana
lude kangakanani ukhula kwinkqubo
iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu lamotrigine